Warbixintan oo uu qoraaga qalinka u qaatay ka tirsan yahay shabkaddaas, isla markaana uu booqasho ku yimi Somaliland mudo sannad ah ka hor, waxa uu ku bilaabay, “Jamhuuriyada isku maacowday Somaliland waxay codadkooda bixiyeen toddobaadyadii la soo dhaafay si ay u doortaan Madaxweyne cusub. Somaliland waa mid koone kaga taala Somalia oo shaqaysa, balse beesha caalamku ay diideen inay u aqoonsadaan wadan madaxbanaan. Markaa Reer Galbeedku miyay curyaaminayaan fursadeeda ugu wanaagsan ee dimuquraadiyada gobolka? Wax inyar ka badan sannad ka hor, ayaan diyaarad nooca Ruushanka qadiimiga ah ka raacay dalka Djibouti si aan duulimaad waqti kooban uu tago Somaliland. waxay ahayd markaygii ugu horaysay, taasoo ilaa markaa ahayd booqashadaydii keliya ee aan ku gaadho Somaliland, taasoo Somalia 20 sannadood ka hor ka go’day, balse aanay cidina u muuqan inay eegaan. Sidaa darteed, waxa wax lala yaabo inaanay weli dunidu eegaynba.
Somaliland waxa ka dhacay dhawaan doorashooyin madaxtinimo, isla markaana marka loo eego doorashooyinka dalalka aadka loo qadariyo sida, Kenya, Suudaan iyo Burundhi – may jirin wax sheegashooyin khaladaad ah oo jiray, may jirin cid ka mid ah goob-joogayaasha caalamiga ah oo ku dhawaaqay wax isdaba-marin ahi. Xataa may jirin wax indhuhu qabteen oo tuhuno ahi. Inkasta oo ay jirtay hanjabaad Al-shabaab ka timi oo sheegasay inaanay codeeyeyaashu doorashaddaas ka qaybgelin, hadana cod-bixiyeyaashu taas way dafireen. Isla markaana markii natiijadii doorashadu soo baxday, isla markaana uu guuldaraystay madaxweynihii talada hayay, waxa jirtay in si nabadgelyo ah uu awooda u wareejinayo Madaxweynaha ay doorashada iskaga soo horjeedeen.
← Muwaadin Shan Sano Ka Hor Shaqadiisa Ku Waayay; “Soo Dhawow Madaxweynaha Mustaqbalka Somaliland-naw Mudane Axmed Maxamed Maxamuud [Silaanyo]”